ओलीबाट धोका पाएपछि माधव नेपालको ‘बोली’ सम्झिएर भावुक बने भीम रावल, अबको बाटो के ? - UjyaloNepal
ओलीबाट धोका पाएपछि माधव नेपालको ‘बोली’ सम्झिएर भावुक बने भीम रावल, अबको बाटो के ?
अध्यक्ष ओलीसँगआइतवार बालकोटमा भएको वार्तापछि उपाध्यक्ष रावलले १० बुँदे सहमतिमा समस्या देखिएको बताउँदै यदि त्यस्तो भएमा एमालेमा बसिरहन कठिन हुने कुरा पनि राखेका हुन्।रावलले सुदूरपश्चिमबाट आफूनिकट नेताहरु भानुभक्त जोशी र झपट रावलसहितसँग छलफल गरेका थिए।
उनले छलफलका क्रममा दश बुँदै कुनै हालतमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसो हुन नसकेमा पार्टीमा फेरि समस्या आउने पनि उल्लेख गरेका छन्।
एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८८ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघिसम्म रावल सुदूरपश्चिम संयोजकको भूमिका थिए। तर २०७५ जेठ २ अघि उनी एमाले उपाध्यक्ष र सुदूरपश्चिम इन्चार्जको भूमिका थिए।अहिले उनले आफू २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामा इन्चार्ज कायम हुनुपर्ने बताएका हुन्। तर पुस ५ पछि नेकपामा देखिएको विवादका कारण अध्यक्ष ओली माओवादीबाट आएका लेखराज भट्टलाई इन्चार्ज बनाइदिएका थिए।
एमालेका अध्यक्ष ओली सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेशका इन्चार्ज फेर्न अनच्छिुक देखिएका छन्। रावलले असन्तुष्टि जनाइरहँदा पनि ओलीले २ जेठअघिका इन्चार्जका रूपमा उनलाई जिम्मेवारी दिन तयार नभएका हुन्। बागमती प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हटाएर माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापा बादललाई जिम्मेवारी दिइएको थिय। त्यहाँ पनि ओलीले शाक्यलाई जिम्मेवारी दिन चाहेका छैनन्।
मुसिकोटको पछिल्लो कोरोना अपडेट
संसद चलाउने र निर्वाचन गराउनेमा मलाई शंका छः ओली